Dalka China Oo Xayiraad Saaray Muslimiinta Laga Tirada Badanyahay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Dalka China Oo Xayiraad Saaray Muslimiinta Laga Tirada Badanyahay
XinJiang(ANN)Dawlada China, ayaa cadàadis saartay dadka Muslimiinta ah ee ku dhaqan dalkeeda xili Laguna jiro bisha barakayan ee Ramadaan, iyadoo si gaar ah cadaadis loo saaray gobolka Muslimiintu ugu baddan yihiin China ee Xinjiang.
Bilawga Bisha Barakaysan ee Ramadaan, ayaa lagu wargeliyay dadka muslinka ah ee degan gobolkaa in Masjidada aan lagu cibaadaysan Karin.
Sidoo kale goobaha adeegyada Bulshada aan la xidhi Karin sida Macalimiinta I yo Ardaydu ay hawlohodii qasanayaan, isla markaana goobaha ganacsiga I yo Huteelada Cuntada ee Muslimiintu isticmaali jireen bisha Ramadaan ay furnaanayaan oo aan la xidhi Karin. Sidanaa waxa Lagu sheegay digniin lagu baahiyay Shebekada qaranka èe State Food and Drug Administration ee Gobolka Xinjiang.
china ayaa marar baddan too hore cadaadis ku saaray dadka Muslimiinta ah ee ku dhaqan dalkiisa in aanay soomin Bisha Barakaysan ee Ramadan, waxaana gobolkaa ka dhacay rabshado Dhiig baddan ku daatay kal hore.
Dadka Islaamka ah ayaa ku Kordhaya dalka China oo mujtamaca intiisa baddan aaminsan yihiin caadooyinka Sanamka ee Buddhism, iyadoo arrintan so weyn uga cadhaysiisay muslimiinta China iyo dacalada dunida.
China iyo dunida kale ee Reer balbeedka,ayaa ka wer wersan korodhka Islaamka, waxayna taasi cabsi gelisay xukuumaddaha wadamadaa, iyadoo xukuumadda tallaaboyinka at qaaday yihiin kuwo foolxun oo any ka dhalankaraan cadhooyin xagga Alleh kaga yimaada.